ဂျပန်သက်ကြီးစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်သို့ မြန်မာလုပ်သားအမြန်ဆုံးစေလွှတ်ခွင့်ပြုရေး ဂျ? - Yangon Media Group
ဂျပန်သက်ကြီးစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်သို့ မြန်မာလုပ်သားအမြန်ဆုံးစေလွှတ်ခွင့်ပြုရေး ဂျ?
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၆ – ဂျပန်သက်ကြီး ရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း ခွင်သို့ မြန်မာလုပ်သားများ အမြန် ဆုံးစေလွှတ်ခွင့်ပြုရေး ဂျပန်သံအ မတ်ကြီးက အလုပ်သမားဝန်ကြီး ထံ လာရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ဇူလိုင်၆ရက် အလုပ်သမား၊ လူ ဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင် အားဝန်ကြီးဌာန ရုံးအမှတ်(၅၁)တွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံအမတ် ကြီးHE.Mr Ichiro MARUYA-MA နှင့်အဖွဲ့သည် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင် အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီးထံ လာရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးရုံးထုတ် ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်း ဆွေက စေလွှတ်ခွင့်ပြုရန်စီစဉ်နေသည့် ဂျပန်သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့် ရှောက်ရေးအလုပ်နှင့် လက်ရှိစေလွှတ်ခွင့်ပြုထားသည့် အလုပ်သင် အလုပ်သမား စေလွှတ်နေခြင်းတို့ နှင့်ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအနေ ဖြင့် မြန်မာပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဝန် ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အဖွဲ့ချုပ်၊ အဖွဲ့ဝင်အေဂျင်စီများကို နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးထား သည့် သဘောတူညီချက်များအတိုင်း ဥပဒေနှင့်အညီ စနစ်တကျအမြန် ဆုံးအဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာစေလွှတ် နိုင်ရေးအတွက် ဝန်ကြီးဌာနဘက်မှ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေမှုများအား ဂျပန်သံအမတ်ကြီးထံ အသေးစိတ် ချပြဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန် ချက်အရသိရသည်။
“”သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက် ရေးအလုပ်လွှတ်ပေးဖို့ကို တို့ဆီက ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေ ပေါ့။ ဒါတွေကို သူတို့ကလာပြီးဆွေး နွေးတာပါ။ တို့ဘက်ကလည်း သူ တို့ဆီကဆောင်ရွက်ပေးမယ့် အခြေ အနေကို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြ တာပါ””ဟု အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး က ပြောသည်။
သက်ကြီးစောင့်ရှောက်ရေး အလုပ်အတွက် မြန်မာလုပ်သားစေ လွှတ်ရန် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန် သံအမတ်ကြီး လာရောက်ဆွေးနွေး နေသည်မှာ အကြိမ်အရေအတွက် မနည်းပြီဖြစ်သလို ဂျပန်နိုင်ငံ ကျန်း မာရေး အလုပ်သမားနှင့်သက်သာ ချောင်ချိရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်း ပြီးခဲ့သည့်လအတွင်းက မြန်မာနိုင်ငံ သို့ လာရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးထား ပြီး ဖြစ်သည်။ သို့သော် သက်ကြီးစောင့်ရှောက် ရေးအတွက်မြန်မာလုပ်သားစေလွှတ် ခွင့်ကို မူဝါဒသဘောတူညီပြီးဖြစ် သော်လည်း စေလွှတ်ခွင့်မပြုသေးဘဲ ဆက်လက်ညှိနှိုင်းနေဆဲသာဖြစ်သည်။
စေလွှတ်ခွင့်ပြုပါက သက်ကြီး ရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် အကူ သူနာပြုလုပ်ငန်းအတွက် ကျန်းမာ ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပို့ချသင်ကြား ခြင်းပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သလို ယင်းလုပ် ငန်းသည် အခြားလုပ်ငန်းခွင်များ၌လုပ် ကိုင်သူများထက် ဘာသာစကားပိုမို ကျွမ်းကျင်ရမည်ဖြစ်၍ ဂျပန်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေး အလုပ်သမားနှင့်သက် သာချောင်ချိရေးဝန်ကြီးဌာန၏သတ် မှတ်ချက်အရ ဂျပန်ဘာသာစကား N3 အဆင့် အောင်မြင်ရမည်ဟုဆို ထားသည်။
ရန်ကုန်မြို့က ကြွက်များ အကြောင်း